Faahfaahin buuxda weerarkii isku-dayga dilka Madaxweynaha DKMG +SAWIRO – SBC
Faahfaahin buuxda weerarkii isku-dayga dilka Madaxweynaha DKMG +SAWIRO
Warar faahfaahsan ayaa ka soo baxaya weerarkii isku dayga dilka ahaa ee maanta lala beegsadey Madaxweynaha dawlada KMG Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo wafdi la socdey, kaasi oo ka dhacay wadada iskux irta magaalada Muqdisho iyo degmada Afgooye.
Weerarkan wuxuu yimid ka dib markii saaka booqasho uu ku tagey degmada Afgooye iyo deegaanada kale eek u dhaw ee dhawaan laga qabsadey xoogaga Shabaabka, iyadoo socdaalka Afgooye Sheekhu ku tagey uu ahaa kii ugu horeeyey mudo lix sano ah, xiligaasi oo uu ahaa Gudoomiyihii golihii maxkamada Islaamiga ee 2006-dii la wareegay awooda magaalada Muqdisho ee caasimad ah iyo qaybo ka mid ah gobolada Koonfureed.
Wafdiga Sheekh Shariif oo ay galbinayeen ciidamada AMISOM iyo ciidamada dawlada KMG Soomaaliya markii ay soo dhameysteen socdaalkooda ayna u soo jihaysteen dhanka Magaalada Muqdisho ayaa waxaa wadada u galey kooxo hubaysan oo ka tirsan xarakada Al-Shabaab, kuwaasi oo galey halka loo yaqaan Calamada kuna dhaw deegaanka Ceelasha Biyaha.
Madaxweynuhu wuxuu saarnaa mid ka mid ah gawaarida qafilan ee aanay xabadu karin ee ay leeyihiin ciidamada AMISOM kaasi oo uu saaka kaga ambabaxay xarunta Madaxtooyada Villa Somalia,waxaana wehliyey gaadiid yar yar oo nooca raaxada, Tikniko,dabaabaadka dagaalka oo ay leeyihiin ciidamada AMISOM waxaana markii ay marayeen deegaanka Calamada hal mar lagu bilaabay rasaas ka dhacaysay noocyada kala duwan ee hubka gaar ahaan qoryaha darandooriga u dhaca iyo RBG (Baasasuukaha).
Ilaalada Madaxweynaha iyo ciidamadii AMISOM ee galbainayey Madaxweynaha iyo wafdigiisa waxay jilibka u aaseen weerarkii Shabaabku soo qaadeen iyagoo rasaastaasi ugu jawaabay nooc kasta oo ka mid ahaa hubkii ay ku hubaysnaayeen, waxaana israsaaseynta labada dhinac ay socotey mudo ku dhaw 50 daqiiqo ah ayaa dhaliyey khasaare dhimasho iyo dhaawac isagu jira, iyadoo la xaqiijiyey ilaa iyo hada geerida askari ka tirsan ciidamada dawlada KMG halka 8 kalena ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen.
Dhinaca xarakada Shabaabka ee weerarkaasi Xash-galka ahaa dhigay wadada ayaan la ogeyn khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee soo gaarey, inkastoo dad ku sugan deegaanka Calamada oo codsadey inaan magacooda saxaafada laga sheegin sababo xasaasiyada warkan uu leeyahay ay u xaqiijyeen SBC in ay arkeen dhaawacyo Shabaabka ka tirsan oo goobtii lagu dagaalamay laga qaaday kuwaasi oo dhanka hawda loola cararay.
Al-Shabaab oo weerarka ka hadashay
Afhayeenka hawlgalada Shabaabka Sheekh Cabdicasiis Abuu Muscab oo shir hadal ka soo saarey weerarka ay ku qaadeen Madaxweynaha dawlada KMG, wuxuu sheegtey inay weerarkaasi ku dileen ilaalada Sheekh Shariif.
Saraakiisha DKMG oo weerarkaasi si kooban uga hadley
Saraakiil ka tirsan ciidamada DKMG Soomaaliya ayaa weerarkaasi si kooban uga hadley waxay xaqiijiyeen in weerarkaasi lala beegsadey Madaxweynaha, iyagoo xusey in ay gacanta ku dhigeen afar ka mid ah kooxihii weerarka jid gooyada ah u dhigay Madaxweynaha, inkastoo si madaxbanaan aan warkan loo xaqiijin.
Si kastaba ha ahaateen weerarkan wuxuu calaamad u yahay sida wali ay u muuqanayso awooda xarakada Al-Shabaab oo mudooyinkii ugu dambeeyey looga itaal badinayey dirirta ka aloosna gobolada Banaadir & Shabeelooyinka, inkastoo xiligan awoodu ku soo koobantey dagaalka ku dhufoo ka dhaqaaq kaasi oo noqon doona hawl adag oo u taal AMISOM & ciidamada DKMG Soomaaliya.
maxamuud cabdi saciid fantastic says:
waxaa bad badiyeey ilaah ka sakoow ciidamada amison oo jilbaha u aasay nimanki rag ahaa